TUSOOYOOYIN: 24 Talooyin Wanaagsan ee Beauty ah oo kuugu Faa'iideysanaya - TELES RELAY
ACCUEIL » VIDEOS »TUSOOYOOYIN: 24 talooyin qurux badan oo qurux badan si ay kuu sameeyaan aad u fiican
TUSOOYOOYINKA: 24 talooyin qurux badan oo qurux badan si aad u sameyso cajiib
Raadi fikrado quruxsan oo isbeddelaya noloshaada iyo in aad kor u qaaddo jadwalkaaga qurxinta! Waxaad baran doontaa talooyin qurux badan oo qiiro leh laakiin gabdhaha kasta waa inay isku dayaan! Uma baahnid inaad tagto dukaanka qurxinta oo aad lacag badan ku bixiso maskaxaha kala duwan - fiirso fiidiyowgeena oo ka dhigno guriga! Turmeric waxaa ku jira antioxidants badan, xoqdo maqaarka, hagaajinaysaa texture iyo yaraynaya pigmentation. Waxaan sidoo kale bixinnaa cuntooyinka maqaarka wajiga ah oo ka dhigaya maqaarkaaga caafimaad badan. Samee maaskaro caleen ah oo aan qaali ahayn oo loogu talagalay madaxa madow ee isticmaalaya ukunta ukunta iyo waraaqda musqusha. Haddii aad leedahay maqaar madow, iskuday maaskaradaas - qaso budada qoryaha, juice orange iyo turmeric. Qodobbada quruxda badan ee faa'iido leh waxay tahay in la sameeyo burin dabiiciga ah oo dibedda oo qallalan oo qallalan. Waxaad u baahan doontaa sonkor, macaan iyo malab. Si tartiib ah u daryeeli bushimahaaga daqiiqad iyo dhibaatada waa la iibiyaa! Haddii aad kacdo ka dib habeenkii hurdo la'aan ah oo maqaarkaagu yahay mid ciriiri ah oo wareegsan mugdi badani, iskuday miiskeena maaskaro ee muuqaal cusub oo dhalaalaya! Qaado baaquli iyo qas karis, jiiska, burka bariiska iyo malab. Codso daqiiqado 20 kana farxi natiijada.
Fiiri macallinka ku saabsan sida loo sameeyo faragelinta Faransiis adoon wax dadaal ah. Haddii aad jeceshahay naqshad farshaxan oo jaceyl ah ama xilliga gu'ga, ku tijaabi barashadayada ku saabsan abuurista qaababka ciddida qalafsan. Uma baahnid dadaal badan si loo abuuro qalbi fudud oo ka soo jeeda dhibco. Naqshadeynta ubaxa ayaa ah doorka ugu wanaagsan ee muuqaalka gu'ga. Raac jaantuskayaga: daboolo ciddiyahaaga leh cirifka cirifka cad iyo samaynta ubax leh calaamade fudud. Isticmaal buraash yar oo ciddida yar, ku dar dhowr dhibcood oo khamriga ah. Isticmaal cadayga farshaxanka isku midka ah, ku calaamadee calaamadeeyaha sare ee ciddiyahaaga kuna raaxeyso natiijada. Abuuri qalab aad u faa'iido leh - calaamadeeyaha badeecadda loogu talagalay cirifka ciddiyaha. Tani waa fikrad aad u fiican, gaar ahaan markaad u baahatid inaad hagaajisid naftaada. Qaado sarreeyaha hore, ka saar xuddunta isla markaana ku rid biyaha ilaa illaa midabku ka baxo. Ka dib halkan ku rid cirbadda ciddiyaha, ka saar oo ku soo celi calaamadeeye.
02: Maskaxda 18 Mucjisada Gooryaanka
05: 44 Fikrada Manicure Guga
07: 31 Wax ku saabsan ciddiyaha caafimaadka leh
12: 16 Maaskara maqaarka cirridka
13: 41 Coconut Cagaarka Cagaarka Qalacday
Waxaad iska diiwaan galisaa farshaxanka 5 daqiiqo GIRLY: https://goo.gl/fWbJqz
Waxaad ubaahan tahay 5 Minutes Crafts KIDS: https://goo.gl/PEuLVt
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=msJ0T7v1188
Markii Lloris uu ku guuleystay Tottenham - VIDEO
Samuel Eto oo ku nool Cameroon tan iyo shalay. Ka eeg adeega carruurta - VIDEO